Wasaaradda A. Dibadda Somalia oo ku amartay Danjirihii Imaaraadka Carabta inuu xilka wareejiyo – Balcad.com Teyteyleey
Warqadan oo ku taariikheysneyd 24-kii bishii hore ee October ayaa ka mid aheyd warqado loo kala diray Safiirada illaa 8 dal oo dhowaan la bedelay, hase ahaatee qaarkood la sheegay inay ku gacan seyreen is bedelka.
Danjire C/qaadir Shiikhey ayaa ka dhega adeegay inuu dalka yimaado, kaddib markii ay u yeertay Wasaaradda Arrimaha Dibadda.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa ku wargelisay Danjire C/qaadir Shiikhey inuu xilka ku wareejiyo Axmed Dahir Maxamed oo noqon doona Siihayaha Safiirka Soomaaliya ee Imaaraadka Carabta.
C/qaadir Shiikhey ayaa ka mid ahaa Danjirayaasha ugu cimriga dheeraa oo muddo 10 sano ka badan ahaa Safiirka Soomaaliya u fadhiyay Imaaraadka Carabta, waxaana dowladdihii hore ay ku fashilmeen inay bedelaan Danjirahan oo ka mid ahaa Danjirayaasha ugu awooda badan, gacan saar dhowna la lahaa Imaaraadka Carabta.
The post Wasaaradda A. Dibadda Somalia oo ku amartay Danjirihii Imaaraadka Carabta inuu xilka wareejiyo appeared first on Ilwareed Online.
Dhaq dhaqaaqyo Ciidan oo ka soconaya Baay iyo Bakool
Guddiga Dhaqaalaha ee GW. oo soo saaray go’aan la xiriira diiwaan-gelinta iyo bixinta rukhsadaha